फोटोग्राफर जाना ब्रिसकी को प्रोफाईल, ब्रोथेल मा जन्मेको प्रोफाइल
ओस्कार-विजेता वृत्तचित्रको सृष्टिकर्ता अब क्याट वर्ल्डको फोटोहरू गोली मारिन्छ
1990 को दशक को अन्त मा, लाना जन्मे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र को एक लंदन मा जन्म कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र ले भारत को दस्तावेज को रूप मा दस्तावेज गरे, जसको रूप मा उनको छ, "विशेष रूप देखि महिलाहरु लाई यौन चयन गर्भपात, दहेज को मृत्यु को माध्यम ले जा सकते हो, विधवा, बाल विवाह। " यो उनको इरादा कहिल्यै थिएन, त्यो वेश्यालय फोटो गर्न - सम्म, त्यो, उनी कलकत्ताको रातो बत्ती जिल्ला सोनागाची लाई पेश गरिएको थियो।
"मैले रेड-लाइट जिल्लामा प्रवेश गर्दा मेरो मान्यताको एकदम बलियो भावना थियो र मलाई थाहा थियो कि म किन भारत आउछु," उनले एक ई-मेल साक्षात्कारमा भने। "मैले दुई वर्षसम्म पहुँच प्राप्त गरें - यो मलाई लामो समयसम्म एक भट्टीमा एक कोठा प्रदान गरिदिनुभयो। म त्यहाँ बस्न सक्दिन। मैले महिलाहरूलाई फोटो खिच्दै गर्दा दिनमा अनुमति दिन र दिन बिताउने बित्तिकै बसोबास गर्दै, हेर्दै, सुन्दै।"
जब बिसिस्ट वेश्याहरु लाई बच्चाहरु संग बातचीत शुरू गर्यो तब भाग्य अझै अर्को बारी भयो। "म बच्चाहरु संग खेल्छु र उनीहरूलाई मेरो क्यामेरा प्रयोग गर्न चाहन्छु। उनी फोटोग्राफी सिक्न चाहन्थे - उनीहरूको विचार मेरो थिएन। त्यसैले मैले अंक-र-गोली फिल्म क्यामेराहरू किने र धेरै बच्चाहरू जो कि सबै उत्सुक र प्रतिबद्ध थिए। तिनीहरूलाई औपचारिक कक्षाहरूमा सिकाउनुहोस्, "उनले भन्छिन्।
धेरै पहिलो कक्षाबाट उनले यसो भन्छिन्, "मलाई केही कुरा थाहा थियो कि विशेष कुरा होईन र मलाई यो फिल्मको लागि आवश्यक थियो। मैले पहिले नै भिडियो क्यामेरा उठाएको थिएन, तर मैले एक किनेको थिएँ र मैले केटाकेटीलाई सिकाउँदै फिल्म खिच्न थाले। र भैंसीमा बस्ने। "
अन्ततः ब्रिस्कीले आफ्नो मित्र, फिल्म निर्माता रस कफनमलाई राजीनामा दिए। अर्को दुई वर्षमा जोडीले ब्रिस्कीका प्रयासहरू केवल बालबालिकालाई सिकाउँदैनन् तर उनीहरूलाई असल विद्यालयहरूमा पुग्नका लागि जहाँ उनीहरूले अझ बढी आशावादी भविष्यको मौका पाउनेछन्।
नतिजा "ब्रूटेलमा जन्मे" को रूप मा ब्रिटिश को कलकत्ता को लाल-हल्का बच्चाहरु संग ब्रिस्की को समय संग एक गंभीर र चिंतित खाता को रूप मा उनि जान्दथे।
खुसी र दिलघाटमा परिणत हुन्छ, यो चलचित्रमा आठ जना बच्चाहरु लाई विशेष ध्यान दिन्छन्, कोची, एक दुखद शर्मीली केटी जो लगभग निश्चित रूपमा वेश्यालयमा जीवन बिताउँछ जबसम्म उनी सोनागच्चीको गरीबी र निराशाबाट बचाउन र बोर्डिङ स्कूलमा प्रवेश गर्न सक्दछन्; र Avijit, सबै भन्दा बिसि ब्रिस्की विद्यार्थीहरु द्वारा चार्ज गरिएको छ जसलाई आफ्नो आमाको हत्या पछि लगभग फोटोग्राफी दिइन्छ। फिलिमको वफादारीको साथ मात्र बच्चाहरु बाट आउछ, अजीजिट फिलिममा प्रारम्भिक साक्षात्कारकर्ता बताउँछन्, "मेरो भविष्यमा आशा बोलाइएको केही छैन।"
हजुरआमा बजेटमा गोली हानियो, हलिवुडको एक हल्का सेटिङमा, "ब्रोहोटल" अस्पष्टतामा निस्केको हुन सक्छ। तर चलचित्रले नै आलोचकों देखि न केवल रोटों को गार्जित गरे; यसले सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र सुविधाको लागि 2004 अकादमी अवार्ड जित्यो। यसबाहेक, बच्चाहरूको फोटोहरूको पुस्तक प्रकाशित गरिएको थियो र ब्रिस्कीले आफ्नो स्कुलको लागि भुक्तानी गर्न मद्दतको लागि एक संस्था, बच्चासँग क्यामेरा स्थापना गरे।
दुःखको कुरा, परी कथा कथाहरू अति धेरै दुर्लभ हुन्छन्। यहां सम्म कि धन र प्रोत्साहन संग लाल रंग को बच्चाहरु को सबै नहीं, अब जवान वयस्कों, हस्तक्षेप को वर्ष मा राम्रो तरिकाले भोगेको छ। ब्रास्कीले बीबीसीको रिपोर्टलाई पुष्टि गर्यो कि फिल्ममा चित्रित एक पछि पछि एक वेश्या बन्यो। उनले यसो गरे "छनौट गरेर र उनको छनौटको सम्मान गर्दछु," ब्रिस्की भन्छन्।
"मलाई त्यो विफलता वा शर्मको बारेमा विचार छैन। मलाई विश्वास छ त्यो उनको लागि उत्तम के हो।"
तर धेरै धेरै अन्य बच्चाहरु भारतमा विद्यालयमा गए, केहि पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा। ब्रिस्कीले कोचीले धेरै वर्षसम्म युटाहको प्रतिष्ठित विद्यालयमा अध्ययन गरेपछि भारत फर्केर आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न अध्ययन गरे। र हाल हाल Avijit, "ब्रोहोल" मा बच्चाहरु लाई कमजोरीले NYU चलचित्र चलचित्र बाट स्नातक गरे। "अद्भुत," ब्रिसी भन्छन्। "म उहाँलाई गर्व गर्थें र सबैले यो पूरा गरे।"
धेरै मानिसहरू, आफ्नो पहिलो फिल्मको लागि ओस्कर जित्थे, त्यो बाटोमा जारी राख्न आशा गर्न सकिन्छ। तर ब्रिस्कीले आफ्नो पहिलो प्रेम, फोटोग्राफी, र "रेवरेंस" नामक एक परियोजनामा ​​फर्किने महसुस गरे।
सोधिने प्रश्न किन उनले उनले फिल्म निर्माण गर्न नचाहने छनौट गरेकी छिन्, 45 वर्षकी ब्रिस्की भन्छिन् कि "एक्स्करले मलाई एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता वा पत्रकार बनाउँछु।"
म संसारबाट एक खुल्ला मार्गमा जान्छु र म वरपर के के छ भनेर जवाफ दिन्छु। 'ब्रोथेलमा जन्मे' र 'बच्चाहरूसँग क्यामेरा' कुनै पनि तरिकामा नियमन गरिएको थिएन। उनीहरूले संसारमा के खोजेको प्रतिक्रिया थियो।
"फोटोग्राफी मेरो माध्यम हो," उनले थपिन्। "म एक परम्परागत कालो-र-सेतो फोटोग्राफर हुँ र म अझै चलचित्रलाई गोली हानेर अन्धकारमा काम गर्दछु।"
"पुनर्वार्ता," ब्रिस्सी भन्छिन्, " प्रार्थना गरिरहेको म्यान्टिसको सपनाको माध्यमबाट।" यो अनुभव निकै बलियो थियो कि मलाई ध्यान दिनुपर्छ। अजीब प्रार्थना गर्ने मन्तिस 'संयोग हुनेछ' र मैले सुराग पछ्याउन थाले। गत सात वर्षमा म्यान्टिड र अन्य कीराहरू फोटो र चलचित्रलाई 18 वटा देशमा ल्याइयो। हाल ब्राजिलमा तिनले जग्गीको फोटो खिचेको छ।
यदि सबै योजना बनाइन्छ भने, ब्रिस्कीको कामको अन्त्य ठूलो मात्रामा फोटोग्राफहरू, चलचित्र र संगीतको साथ यात्रामा संग्रहालय हुनेछ। परियोजना, जुन ब्रिस्कीले खुल्ला धन प्राप्त गर्दछन् जब खुल्ला आशा गर्दछ, "सबै जीवनका फारमहरूको सन्दर्भमा र हाम्रो दृष्टिकोण बदलिन्छ।
"धेरै फरक छैन," उनले थपिन्, "मैले जेरीमा के गरेँ - डरलाग्दो व्यक्तिहरूलाई ध्यान दिइयो, बेवास्ता गरे, दुर्व्यवहार, तिनीहरूको दृष्टिकोणबाट।"
के समाचार पत्रहरू मरिरहेका छन्?
कसरी प्रसारण प्रसारण समाचार प्रतिलिपि लेख्नुहोस्
के पत्रकारहरू उद्देश्य हुनुपर्छ वा सत्य बताउनुहुन्छ?
ब्रेकिंग समाचार स्टोरी के हो?
सम्मोहनका उदाहरणहरू के हुन्?
शीर्षकको अर्थ: "राईमा समातेर"
Virgo र Virgo प्यार संगतता
PEREZ - नाम अर्थ र उत्पत्ति
लिता को कस्टम, परंपरा र लोकगीत
POLK उपनाम र उत्पत्तिको उपनाम
'सुविधा' मूवी समीक्षा: प्रयोग गोन गलत
रचना लेखन को यंत्र
ओस्कार को हिस्पैनिक अभिनेताहरु - जोसेफ फेरर देखि बेनिसेओ डेल टोरो सम्म
कसले भन्छ "तिमी परमेश्वर हौ?"
6 बेंसीथौं शताब्दीबाट मुख्य युरोपेली डाक्टरहरू
प्रिमियर वेयर रक जर्सी - समीक्षा
निर्देशकहरूलाई पहिचान गर्नुहोस्
विलियम हेनरी हैरिसन को बारे मा 10 दिलचस्प र महत्वपूर्ण तथ्य
टोकियोपपबाट प्रेत मंगाको बारेमा सबै
Hoedads: उपकरण र सहकारी
10 स्मार्ट डायनासोर
अमेरिकी गृहयुद्धको दौडान Richmond को युद्ध